I-UNICEF yokubonelela ngeManyano ye-Afrika nge-220 yezigidi zeedosi zeJ & J COVID-19 Vaccine
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » I-UNICEF yokubonelela ngeManyano ye-Afrika nge-220 yezigidi zeedosi zeJ & J COVID-19 Vaccine
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Isivumelwano phakathi kweUNICEF kunye neJanssen Pharmaceutica NV siyakunceda ekuphumezeni i-Advance Purchase Commitment (APC) etyikitywe phakathi kwe-African Vaccine Acquisition Trust (i-AVAT) neJanssen ngoMatshi walo nyaka.
I-Janssen Pharmaceutica NV yokubonelela ukuya kuthi ga kwi-220 yezigidi zeedosi zentsholongwane ye-J & J yethamo elinye kuwo onke ama-55 amaLungu eManyano ye-Afrika ukuphela kuka-2022.
Isivumelwano sikhusele ukhetho loku-odola ezinye iidosi eziyi-180 yezigidi, ukuzisa ukufikelela okuphezulu ukuya kuthi ga kwizigidi ezingama-400 zeedosi ukuphela kuka-2022.
Ugonyo luka-Janssen lwe-COVID-19 lufumene uLuhlu lwezoNcedo oluNgxamisekileyo lwe-WHO ngoMatshi 12 kwaye luxhomekeke kuthungelwano lonikezelo lwehlabathi ukuvelisa isitofu sokugonya.
I-UNICEF ityikitye isivumelwano kunye IJanssen Pharmaceutica NV ukubonelela ukuya kuthi ga kwi-220 yeedosi zesitofu sedosi esinye se-J & J kuwo onke amaLungu angama-55 amaLungu eManyano ye-Afrika (AU) ngasekupheleni kowama-2022. Zimalunga nama-35 ezigidi iidosi eziza kukhutshwa ekupheleni kwalo nyaka.
Isivumelwano phakathi UNICEF kwaye iJanssen Pharmaceutica NV izakunceda ekuphumezeni i-Advance Purchase Commitment (APC) etyikitywe phakathi kwe-African Vaccine Acquisition Trust (i-AVAT) neJanssen ngoMatshi walo nyaka. Eso sivumelwano sikhusele ukhetho loku-odola ezinye iidosi ezili-180 yezigidi, ukuzisa ukufikelela okuphezulu ukuya kuthi ga kwizigidi ezingama-400 zeedosi ukuphela kuka-2022.
I-African Union iseke i-AVAT ngo-Novemba 2020 ukuhambisa izitofu ze-COVID-19 kwilizwekazi lase-Afrika, ngeenjongo zokugonya iipesenti ezingama-60 zelizwe ngalinye le-AU. Ngaphantsi kwesi sicwangciso, i-African Export-Import Bank (i-Afreximbank) kunye ne-AVAT batyikitye isivumelwano sokusebenzisana egameni le-AU malunga nophuhliso lweNkqubo-sikhokelo yokuThengwa kokuThengwa kwangaphambili (i-APC) yokuxhasa ukufikelela kwelizwe eliLilungu kwizitofu ze-COVID-19. I-UNICEF iya kuthenga kwaye ihambise izitofu ze-COVID-19 egameni le-AVAT. Amanye amaqabane abandakanya amaZiko ase-Afrika okuLawula nokuThintela izifo (i-Afrika CDC) kunye neBhanki yeHlabathi. Ngelixa izitofu zokugonya ezininzi kulindeleke ukuba zibeyinxalenye yepotifoliyo yenyathelo, isitofu sokugonya sedosi esisodwa sikaJanssen sesokuqala ukubandakanywa.
“Amazwe ase-Afrika kufuneka afikeleleke kwaye afikeleleke ngokulinganayo kwizitofu ze-COVID-19 ngokukhawuleza. Ukufikelela kwisitofu bekungalingani kwaye kufanelekile, kungaphantsi kwepesenti enye yabemi belizwekazi laseAfrika ngoku abagonyelwe i-COVID-1. Ayinakuqhubeka le nto, ”utshilo uMlawuli Jikelele weUNICEF uHenrietta Fore. "I-UNICEF, nembali yayo ende yokuhambisa amayeza kwihlabathi liphela, ixhasa iinzame zokugonya ze-COVID-19 nge-AVAT, i-COVAX, kunye nezinye iindlela zokwandisa ukubonelela kunye nokufikelela kwizitofu zokugonya."
Ukuzoba ngamava amashumi eminyaka njengoyena mthengi mkhulu wesitofu sokugonya esisodwa kwihlabathi njengoko isenza minyaka le kugonyo oluqhelekileyo, i-UNICEF isebenza njengearhente yokuthenga kunye neyokuthengwa kwezinto ngenxa yentsebenziswano ye-AVAT. I-UNICEF ime ngomumo ekuququzeleleni ukuthengwa, ukuthuthwa kunye nokuhanjiswa kwezitofu zokugonya kwakamsinya nje ukuba zifumaneke kwaye amazwe angamaLungu e-AU akulungele ukuwafumana. Ngobuninzi bayo bokusebenza kunye namashumi eminyaka yobungcali ekulawuleni ukuthuthwa kwempahla, i-inshurensi kunye nokuthuthwa kwezitofu ezifuna ukubambelela ngokungqongqo kwiimfuno ezibandayo, i-UNICEF iza kusebenza nomzi mveliso wezitofu, abathumeli bezithuthi kunye neenkampani zezothutho ukufumana imithamo kuluntu oluyidingayo.